टिप्पणी धनकुमारी सुनार
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ।
आधुनिकताको अव्यवस्थाले नाशिँदै शहरको सुन्दरता आधुनिकताकाे अव्यवस्थाले कलात्मकता र शहरी सौन्दर्य मात्रै नाशिँदै छैन, विश्व सम्पदामा सूचीकृत पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक महत्त्व‍का संरचना भएका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरजस्ता शहर पनि कुरूप बन्दै गएका छन्।
लौठसल्लाको नाममा के छ हजुर?
लौठसल्लाको ‘ट्याक्सस माइरेई’ प्रजाति नेपालमा रहे–नरहेको बारे विज्ञहरूको विवादले सर्वसाधारण किसानको जीविकोपार्जनमा असर पारेको त छ नै, यो प्रजातिकै भविष्यमा पनि प्रश्नचिह्न लागेको छ।
निम्ता दिने मान्छे नै नरहेपछि... ह्यारिसर्वको जेसीएच जिगल फ्युनरियल होमबाट फर्किंदा मेरो दिमाग पनि शून्य र स्थिर भयो, किनकि शरीरमा रोगले बास गरे पनि हरेस खानुहुन्न भनेर अर्ती दिइरहने दिलदार जमुना आमालाई त्यहिँ छाेडेकाे थिएँ।
आदिवासी जनजातिको चासो : किन अघि बढ्न सकेन माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजना? त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थाल्नुअघि त्यहाँका आदिवासी जनजातिसँग जमीन, जल र जंगल प्रयोगबापत क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक यस्तो शैलीमा बन्न लागेको आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले स्थानीयमा आशंका पैदा भएको छ।
सानिमा ब्यांक लिमिटेडले कीर्तिपुरमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ।
वर्ल्डलिंकको सद्भावना दूतमा शृंखला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको सद्भावना दूतमा शृंखला खतिवडा नियुक्त भएकी छन्।
सुत्केरी जाेगाउन बरदान बन्याे एयर एम्बुलेन्स
सुत्केरी हुने क्रममा स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका दुर्गमका महिलाको ज्यान जोगाउन ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवा बरदान बनेको छ।
‘चुरे दोहनमा व्यापारी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको साँठगाँठ छ’ २५ पुस २०७६ मा क्रसर उद्योगीको टिपरकाे ठक्करबाट मिथिला नगरपालिका–५ धनुषाका २४ वर्षीय ओमप्रकाश महतो ‘दिलीप’ले ज्यान गुमाए। आफ्नै गृहजिल्ला तथा चासो र चिन्ताको विषयमै काम गरिरहेका युवाको मृत्युले मर्माहत पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग गएको वर्ष यही समय हिमाल खबरपत्रिकाले कुराकानी गरेको थियो।
२००७ मा मात्रै पूरा भयो राजा त्रिभुवनको हवाईजहाज चढ्ने इच्छा
काेलकाताबाट हवाईजहाज आउँदा नै राजा त्रिभुवनले चढेर काठमाडाैं उपत्यका हेर्ने इच्छा गरेका थिए, तर मोहनशमशेरले मानेनछन्। त्यसपछि २००७ सालको क्रान्तिका क्रममा शरण लिन सपरिवार भारत जाँदा मात्रै हवाईजहाज चढ्न पाए।